TAARIIKHDA MAANTA: | DAABACADA WARKA: June 27, 2003
Ø Dagaalo kulul oo dhex maray Ciidanka wadaniga Xoreeynta Ogaadeenya iyo Ciidamada Cadawga Itoobiya.
Ø Dabaal dag loo sameeyay Xoriyada Gobolada waqooyi ee wadanka Soomaaliya.
Ø Muran xuduudeed oo ka dhex taagan beeralay Ehtiopian ah iyo beeralay Sudaan ah.
Ø Maamulak Itoobiya ka taliya oo meel walba Musuqmaasuqii gaadhsiiyay.
Ø Meles Abihii oo sheegay in ay dhibaato haysato wiilkiisa.
Ø Labanin oo wadanka Kenya lagu xidhay.
Ø War bixin ku saabsan Shir sanadeedkii 9aad ee Jaaliyadaha Ogaadeenya oo ka furmay Caasimada wadanka Sweden
Ø Barnaamuj gaar ah oo aanu kaga hadlayno, halka uu marayo adeega Bulshada ee wadanka Ogaadeenya iyo wax yaabo kale oo aad ka heli doontaan.
Dagaalo kulul oo dhex maray Ciidanka wadaniga Xoreeynta Ogaadeenya iyo Ciidamada Cadawga Itoobiya.
06.06.2003 Iska hor imaad dagaal oo ku dhex maray Ciidamada Doolka ku jooga Ogaadeenya ee gumaysiga Itoobiya iyo ciidamada xaqudirirka Xoreeynta Ogaadeenya, meesha la yiraahda Malablay oo ka tirsan Dagmada Danood, ayaa waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 2 Askari waxaana lagaga dhawcay 2 Askari oo kale.
21.06.2003 weerar mir ah oo ay ku qaadeen Ciidamada geesiyiinta Xoreeynta Ogaadeenya, fadhiisimaha
Ciidanka Gumaysiga Itoobiya ee magaalada Qabridahare, ayaa waxaa Ciidamada dulmiga dheefsada ee gumaysiga Itoobiya loogu gaystay jab xoog leh oo ku riday Jaha wareer iyo khalkhal. Dagaalkaas oo ahaa mid mudo dheer socday ayaa waxaa Ciidamada Cadawga Itoobiya lagaga dilay tiro lagu sheegay 25 Askari, waxaana lagaga dhaawacay tiro kale oo badan balse aan lasoo xaqiijin. Wararku waxay intaas ku darayaan in ay halkaasi ku dhaawacantay qof dumar ah oo ka mid ahayd shacabka magaalada kadib markay ciidamada gumaysiga Itoobiya rasaas la beegsadeen xaafadihii shacabku daganaa.
18.06.2003 waxaa dhinaca Soomaaliya u dhaqaaqay Ciidamo Itoobiyaan ah oo wata 200 oo gawaadhida gaashaman ah iyo Hub kale oo aad u fara badan. Ciidamadaas oo ka dhaqaaqay Magaalada Qabri Dahare ayaa la sheegayaa in ay u sii jeedaan dhinaca koonfurta Soomaaliya. Dad ku dhadhaw saraakiisha ciidamada ayaa noo sheegay in ay ciidamadaasi xoojinayaa kooxaha Itoobiya gacan sarka la leh ee koonfurta Soomaaliya.
Dabaal dag loo sameeyay Xoriyada Gobolada waqooyi ee wadanka Soomaaliya.
Waxaa shalay oo bishu ay aheeyd 26.06.2003 shacabka Soomaaliyeed ay u dabaal dagayeen maalintii madax banaanida Gobolada Waqooyi ee Soomaaliya. Dabaal dagaas oo ka dhacay guud ahaan Soomaaliya ayay dadku hanbalyo ku saabsan maalinta qaaliga ah isugu dirayeen.
Golaha Wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu hambalyo u diirayaa guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed, Maalinta 26ka bisha juun oo ku aadan maalintii ay xoroobeen gobollada Waqooyiga Jamhuuriyadda Soomaaliyeed.
Maanta waa maalin ku weyn shacbiga Soomaaliyeed, sidaas darteed wuxuu Golaha Wadatashiga Soomaaliyeed u jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed in ay dib uga fekeraan dhibaatadii iyo halgankii dheeraa ee loo soo maray madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliya, ayna ku dadaalaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, waana tii horey loo yiri "Gacmo wadajir bey wax ku gooyaan", taas oo na dareensiineysa qiimaha uu leeyahay wadajirku.
Golaha Wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu ilaahey uga baryeynaa munaasabadan qiimaha badan darteed in shacbiga Soomaaliyeed ka dulqaado dhibaatadan 13 jirsatay, isla markaana ilaahey tusiyo dariiqa toosan.
Maamulak Itoobiya ka taliya oo meel walba Musuqmaasuqii gaadhsiiyay.
Wararka naga soo gaadhaya Magaalada Adis Ababa ayaa sheegaya in wakaalada Xooga Korantada ee wadanka Itoobiya uu ku yimid sanadihii ugu danbeeyay 50% hoos u dhac dhaqaalaheeda iyo wax qabadkeedaba.
Hoos u dhacan ku yimid xooga Korantada ayaa waxuu sababay in warshadihii yayaraa ee wax soo saarka ay waayaan Koronto ku filan, taasina waxay sababtay in ay shaqadoodii ku waayaan qaar badan oo ka mid ahaa Shaqaalaha warshadaha wadanka Itoobiya.
Dad ku dhadhaw Saraakiisha Xooga Korantada ayaa noo sheegay in hoos u dhacan ku yimid korontada uu sababay musuqmaasuq ka jira maamulka sare ee xooga korantada.
Muran xuduudeed oo ka dhex taagan beeralay Ehtiopian ah iyo beeralay Sudaan ah.
Warar aanu ka soo xiganay wakaalada wararka AFP ayaa sheegaya in uu muran ba,ani ka taagan yahay Beeralayda Itoobiya iyo Suudan. Muranbkaas oo soo socday mudo 7 Sano ka badan ayaa waxaa uu dhaliyay dagaal dhex maray Beeraleeydaas. Nin u hadlay beeraleeyda Suudaan ayaa yidhi waa in xal laga gaadho arintan oo waliba beeralayda suudaan dhulkooda loo daayo, hadii kale waxaa hoos u dhacaya wax soo saarka beeralayda Suudaan. Wadanka Suudaan ayaa dhulkaas ka heli jiray Hadhuudh gaadhaya 2.8 Malyan oo tan iyo 1.4 Milyan tan oo Saliid ah.
Khilaafkan oo hada maraya muran iyo gacan ka hadal kooban ayaa laga cabsi qabaa in uu dhaliyo colaad balaadhan oo deegaanka saameeysa.
Meles Abihii oo sheegay in ay dhibaato haysato wiilkiisa.
Wargayska Infoytement oo waraysi la yeeshay Ra,isal wasaaraha wadanka Itoobiya Abihii oo 77 jir ah, dhalayna 13 ilmood, ayaa sheegay in ay wiilkiisa dhibaato wayni haysato, dhibaatadaas oo la xidhiidha dhinaca siyaasada & dhaqaalaha, taas oo keenatay in aad uu u fikiro oo hurdo la, aan ku riday.
Waxuu yidhi Wakhtigan casri ah oo ay siyaasadu hor martay ayuu rabaa in uu wiilkaygu Itoobiya u taliyo, waxaa kale oo uu Odoygu sheegay in maalinba maalinta ka danbeeysa uu Mucaaradku sii badanayo oo waliba ay ka mid yihiin kuwii uu u soo halgamay waa sida uu hadalka u dhigaye.
Mar wax laga waydiiyay waxuu jeclaa in uu wiilkiisu nodo waxuu yidhi Wiilkayga waxaan la rabay in uu dhaktarnimo barto siyaasadana lama rabin laakii Sanadkii sadexaad ayuu wax barashadii kaga tagay oo uu duurka galay.
Waraysiga Melis Abihii ayaa waxuu muujinayaa in uu Ra, isal wasaraha Itoobiya xaaladiisa caafimaad ee dhinaca maskada ay wax soo gadheeyn.
Labanin oo wadanka Kenya lagu xidhay.
war aan kasoo xiganay Ideecada STN ayaa sheegaya in Ciidamada Amaanka ee Kenya ay gacanta ku dhigeen 25.06.2003 labanin oo lagu tuhmay fal Argagixiso. Labada nin oo mid somali yahay magaciisana lagu sheegay Jareef, iyo mid Itoobiyaan ah, ayaa lasheegayaa in ay qaban qaabinayeen fal ay ku qarxinayaan guriga ku yaala goobta shirku uga socdo kooxaha Soomaaliyeed, oo uu daganaa Kornayl Cabdullaahi Yusuf Ahmed
Ninka Itobiyaanka ah ayaa kudoodaya in uu katirsan yahay Ciidanka Sirdoonka ee Itoobiya, wararku waxay intaa ku darayaan in ay labada nin xidhidh lalahayeen 4 nin oo katirsan ciidamada sirdoonka ee itoobiya oo lagu xidh xidhay magaalada Gaal kacayo.
Waxaan horay uga war haynay in ay dowlada Kenya ku soo rogtay muwaadiniinta Itobiya sharci xadadaya joogitaan kooda kenya, wararku waxay intaas kudara yaan in ay xukuumada Itoobiya khal khal ku hayso arimaha nabad galyada ee Kenya.